OGG waa nooc qaabka file weel ee ay aasaas Xiph.Org ah. Qaab file weel Tani keydin karaa audio, video iyo waxyaabaha kale hoorto wax ku ool ah. MP4 weli qaab kale file video cajiib ah taas oo ah mid aad u caan ah oo ka mid ah dadka isticmaala ay. Si kastaba ha ahaatee waxaa jira waqtiyo aad rabto in aad si loogu badalo ah file video MP4 qaab file OGG ah. Tani waxay noqon kartaa sabab dhowr sababood. Mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee ka dambeeya waa in OGG waa qaab la il furan file taas oo macnaheedu yahay waxaa jira arrimo liisan lahayn. Dadka qaarkood ayaa sidoo kale ka heli tayada video ah OGG ka fiican
Part1: Best MP4 in OGG Video Converter
Part2: MP4 Free in OGG Video Converter
Part3: Extended Aqoonta OGG iyo Qaabka MP4
Haddii aad raadinayso ugu fiican MP4 in OGG file video Converter, markaas Wondershare Video Converter Ultimate waa doorashada ugu fiican aad u! Wondershare Video Converter Ultimate Waa mid ka mid ah video ugu fiican maanta diinta baakadaha software laga heli karo suuqa. Waxaa ku jira tiro ka mid ah muuqaalada oo xiiso leh iyo kalsoonida Wondershare, wax soo saarka uu noqdo tijaabiso.
Waxaad kala soo bixi kartaa Wondershare Video Converter Ultimate halkan: http://www.wondershare.com/pro/video-converter-ultimate.html .
Liiska feature ee Wondershare Video Converter Ultimate ka mid ah:
• Wondershare Video Converter Ultimate taageeraa in ka badan 150 qaabab file si aad si fudud u bedeli karaan mid ka mid ah qaab file in kale.
• Xawaaraha diinta ee Wondershare Video Converter Ultimate waa 30 jeer ka dhakhsi marka la barbar dhigo baakadaha software la mid ah laga heli karo suuqa.
• Mid ka mid ah qaababka ugu soo jiidashada badan ee Wondershare Video Converter Ultimate waa in ay ka dhabayso mid qaab file mid kale oo aan laga badinin tayada video asalka.
• Wondershare taageertaa websites video caanka ah sida YouTube, vimeo iyo Dailymotion, si aad si fudud soo bixi kartaa jecel videos aad ka si deg deg ah waxaa.
Halkan waa tutorial yar oo aad qaadi doonaa iyada oo loo marayo tallaabooyin ku saabsan sida loo badalo MP4 ah in qaab file OGG:
Tallaabada 1 Daahfurka software iyo shuban faylka
Ku rakib Wondershare Video Converter Ultimate iyo abuurtaan software ah. Marka aad bilaabay software-ka, tallaabada xigta waa in ay ku shuban faylka galay interface ka. Waxaad ku shuban kartaa file u MP4 video si loogu badalo midkood u soo jiiday in interface ama doorashada file ka dhex 'darto files' button click.
Marka aad ku raran yihiin file MP4 soo galeen interface ka, tallaabada xigta waa in la qeexo qaab wax soo saarka ah ee faylka ku dhashay. Tan iyo markii aanu diinta ah MP4 video file in qaab file OGG, qaab wax soo saarka waa in ay ahaadaan qaabka file OGG.
Ka dib markii aad soo xulay qaab wax soo saarka ee video ah, tallaabada xigta waa in la saxaa. Riix badhanka "edit" oo ku yaalla dhinaca midigta ee video ah. Marka aad guji badhanka this, Murayaad tafatirka ka fura oo hadda aad xaalkaa kartaa video oo waafaqsan shuruudaha aad. Waad beddeli kartaa midabka, midowdo laba videos, shaandheyn video iyo samayn kale oo badan oo leh hawlaha tafatirka la yaab leh ay bixiyaan Wondershare Video Converter Ultimate. Marka aad ku qanacsan tahay natiijada, badbaadin video iyo sii wado in tallaabada xigta.
Tallaabada 4 Beddelaan qaab file MP4 in qaab OGG ah
Marka aad sameeyey oo dhan goobaha, talaabada ugu dambeeya waa in la riix badhanka 'diinta' si dhab bilowdo hawlaha qaab beddelidda. Button diinta waxa uu ku yaalaa hoose ee shaashadda.
Haddii aad raadinayso MP4 si xor ah OGG video Converter, markaas Wondershare Video Converter Free waa doorashada ugu fiican aad u! On lid ku ah Wondershare Video Converter Ultimate, Wondershare Video Converter Free gebi ahaanba bilaash ah oo ah qiimaha taas oo ah sababta ay u tahay doorashada ugu fiican ee loogu talagalay dadka raadinaya Converter oo lacag la'aan ah.
Wondershare Video Converter Free Waa lacag la'aan ah oo ah qiimaha iyo wax iibsiga ma loo baahan yahay si ay u abaalmarinayn oo dhan faa'iidooyinka software ah.
Wondershare Video Converter Free Kuu ogolaanaya in aad si loogu badalo aad videos si dhakhso ah ula xawaaraha weyn. Waxa ay taageertaa in ka badan boqol qaabab file u audio iyo video labadaba.
Wondershare Video Converter Free Software waa ka sii badan intii kaliya software qaab video diinta ah. Waxa kale oo kuu ogolaanaya in dadka isticmaala ay u soo bixi videos iyo iyaga oo aad u saxaa.
The qaabab ay taageerayaan ma aha sida ugu badan ee Wondershare Video Converter Ultimate.
Fadlan raac tallaabooyinka hoose si loogu badalo aad videos isticmaalaya Wondershare Video Converter Free:
Tallaabada 1 Daahfurka Wondershare Video Converter Free iyo shuban faylasha video
Tallaabada ugu horeysay waa in aan bilowno Wondershare Video Converter Free iyo shuban faylasha video si aanay u soo noqon by jiidayeen files kala interface ka.
Marka aad ku raran yihiin ee file video jeclaystay, tallaabada xigta waa in la qeexo iyo qaab wax soo saarka ee files sababtay. Waxaad kala dooran kartaa qaab saarka ka Murayaad saxda ah ee qaybta "Qaabka Output".
Tallaabada 3 Beddelaan faylka ku raran yihiin
Marka aad sameeyey oo dhan goobaha, tallaabada ugu dambeysa waa inuu ku soo bilowdo hawlaha qaab beddelidda. Riix "Beddelaan" button, si ay u bilaabaan beddelidda ee files in qaabka wax soo saarka la doonayo.
Audio file / Video
Description OGG waa weel u audio iyo video files. Tani waa qaab file nidaamka furan oo maqal ah oo tayo leh / video waa aad uga wanaagsan tartanka.
MP4 waa qaab video file ku haboon qaadi karo iyo aaladaha kale ee badan. MP4 waa heer sare ah oo caan ka mid ah dadka isticmaala ay sabab u tahay in sharcigaasi waafaqsan yahay iPod iyo PSP.
Macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan qaab file OGG
Sida loo badalo OGG in MP4?
Macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan qaab file MP4
Sida loo badalo oo ay DVD gubi MP4
> Resource > MP4 > Sida loo Beddelaan MP4 in OGG la Loss Tayada Zero?